Garoowe : Kulan dhexmaray Puntland ,TPEC & 6d Ururada Siyaasadeed. | Sahan radio
Garoowe : Kulan dhexmaray Puntland ,TPEC & 6d Ururada Siyaasadeed.
Garoowe (SR): Kulankaan oo ahaa mid u dhaxeeyey Maamulka Puntland ,Gudiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland TPEC Lixda Urur siyaasaadeed ee Puntland.
Kulankaa ayaa ka dhacay Xarunta Horumariunta iyo Cilmi baarista Puntland ee PDRC oo iyadu fududaynaysay Kulanka waxaana looga arinsanayey sidii la isula meeldhigi lahaa qorshaha Horumarineed ee Nidaamka dimoqradiyeynta Puntland .
Kulanka oo uu furay Madaxweyne kuxigeenka Puntland Gen,C/samad Cali shire ayaa ujeedka lagu sheegay sidii loo turxaan bixin lahaa arrimaha barnaamijka axsaabta badan iyadoo uu jiray khilaaf baahsan oo u dhaxeeyey qaar ka mid ah ururada siyaasadeed iyo Xukuumadda kaasi oo la isku mariwayey wax ka badalka Xeerka Doorashooyinka Golayaasha deegaanadda Puntland ee bisha May lagu waday in dalka laga qabto.
Kulanka waxaa soo ajiibay Xubnaha Gudiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland,Masuuliyiin ka socotay Xukuumadda iyo Wakiiladda Uruarada HORSEED,MIDNIMO,HORCAD,UDAD ,PDA & WADAJIR.
Kulanka ayaa la shaaciyey in inta uu socdo lagu lafo guridoono waxyaalaha ay isku hayaan gudiga doorashooyinka ,Xukuumadda iyo Ururada 5 ka mid ah oo isku diidan wax kabadalka xeerka Doorashooyinka Dowladaha Hoose ,kaasi oo todobaadkii hore xukuumadu hordhigtay Golaha wakiiladda Puntland oo fadhi aan Caadi ahayn uu isugu yeeray Madaxweynaha Puntland.
Lama oga waxyaalaha rasmiga ah ee kasoo bixidoona kulankaan.